သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာပုံစံက အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါသလား
19.9.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ကျွမ်းကျင်သူတွေက နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကြား ဆက်သွယ်ချက်တွေကို လေ့လာနေကြပါတယ်။ ဒီရောဂါအစပိုင်းမှာ သာမာန်မေ့တတ်တာေ...
အသက် 65 နှစ်အထက် အမျိုးသမီးများတွင် မကြာခဏသတိမမူမိသည့် ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာစု
9.9.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ပါရာသိုင်းရွိ်ုက်ဟော်မုန်း (PTH) အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ခြင်းပြဿနာသည် အသက် 65 နှစ်နှင့်အထက် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများထက် နှစ်ဆခန့်ပိုမု...
သကြားစားသုံးခြင်းဟာ ကင်ဆာရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသလား?
2.8.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
သကြားကြောင့် ကင်ဆာပြန့်ပွားနှုန်း မြင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးနားဝ ရှိကြတာကြောင့် တချို့သူတွေဟာ ကင်ဆာပြန့်မှာကြောက်ပြီး သကြားစားခြင်းက...
9.6.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အဖြစ်များတဲ့အရေပြားပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ယားယံခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားထူခြင်း စတာတွေက လူတိုင်း...
2.6.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
1. ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် များတဲ့သူတွေမှာ အဆစ်နာရောဂါ ပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိတာကြောင့် မိမိအသက်အရွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရွ...
အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ
29.5.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေးတဲ့ဆဲလ်တွေက ဒီပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်မှုရပ်သွားတဲ့အခါမှာ ဆံပင်ဖြူလာပါတယ်။ Hydrogen Peroxide ဓာတ်တွေ ဆံပင်ထဲမှာ မျာ...